उत्साहले हृदय भरिएर आउछ तर ....? - सुनाखरी न्युज
उत्साहले हृदय भरिएर आउछ तर ….?
Posted on: January 11, 2021 - 7:29 pm
गाेपी ढकाल – बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह बाट राष्ट्रिय एकीकरण गरि जाेडी बक्सेकाे सुगन्धित नेपाली माटाेमा …… विचारकाे एकीकरण गर्ने राजनेता अब युगले खाेजेकाे छ । किनकि पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा नेपाल देश भरिनै आज उर्लिएकाे युवा उभार देख्दा उत्साहले हाम्राे हृदय भरिएर आउछ तर आजकाे उभार विभिन्न झुण्डमा एक अर्का माथि विश्वास गर्न नसक्ने भुरे टाकुरे अवस्थाले ज्यादै चिन्तित बनाएर ल्याउछ ।
त्यसैले झुण्ड – झुण्डमा विभाजित कन्जरभेटिभ विचार लाई एउटै धागाेमा उनेर सग्लाे माला बनाउन सक्ने भराेसा याेग्य राजनेता समय संगै अब हामीले खाेज्नु पर्ने भएकाे छ । हाे , त्यस्ताे पात्र पहिले पनि हाम्रा अगाडि देखिएका थिए । त्याे देखेर हामी सबैले आशा र भराेसा पनि गरेकै हाे । तर आफ्नै अहंकार बाट उम्लिएकाे आडम्बरकाे पिराे रागले त्याे भराेसा लाई अल्पायुकाे बनायाे । त्यसपछि आफ्नै राप र तापले गलाएर छ महिनामा सुक्ने घाँस भनाैं वा मकैकाे ढाेड जस्तै सुकाएर आफ्नै कुण्डाले विचारकाे सिर्जन भूमि बांझाे बनायाे । १२ बुंदे दिल्ली सम्झाैताले उजाड बनाएकाे स्वराष्ट्रिय चिन्तन अनि सिर्जनाकाे विचाररूपी पुष्पवाटिका हराभरा बनाउनु पर्दछ भन्दै २०६४ पछि हाम्राे पनि सहभागिता उत्तिकै थियाे । तर २०७२ पछिकाे आसक्ति र तृष्णाले विचार , मुद्दा र एजेन्डा लाई खण्डित बनाउदा झुण्ड – झुण्डमा छरिन पुगेका सबै राष्ट्रवादी हरूलाई सम्हाल्दै बटुलेर राख्न सक्ने सरल ,सहज र खुला कितावका राजनेता अब निस्कनु पर्दछ भन्दै आजकाे दृश्य सहित कलम चलाएकाे हाे । मेराे बारेमा जन्मकाे उमेर कसैले साेध्ने हाे भने … जीवनकाे उत्तरार्द्वकाे आगनमा पुगेकाे छु त्यसैले त्याे सिमित छ तर हामीले बाेकेकाे विचारकाे आगन भने फराकिलाे र सीमाहीन मात्र हाेइन ….. कहिल्यै नमर्ने अमर अनि अजर पनि छ । त्यसैले सबैमा आग्रह गर्दछु – राजसंस्था वादी र सनातन हिन्दुवादी हरू सबै आत्मियताकाे अंकमालले वेष्ठित बनेर हातेमालाे गर्दै हिड्नु पर्ने समय आएकाे छ । किनकि सबैले चाहेकाे विषय एउटै हाे अनि मिसन र गन्तव्य पनि एउटै हाे भने ….. झुण्ड – झुण्डमा विभाजित हुनु पर्ने कुनै कारण छैन ।
किन्तु विचार एउटै भएर पनि आफ्नाे कार्यशैलि प्रति असहमत हुनासाथ लात्तीले हानेर हुर्‍याउने स्वभाव र चरित्रका कारण डाेरी डढेर खरानी भयाे तर डढेर बटारिएकाे त्याे डाेरीकाे डाेव देखाउदै — मेराे डाेरी कसैले पनि छुन पाउदैन …………. भन्ने संकिर्ण मानसिकता जलकुम्भि झैं झांगिन पुग्दा एउटै विचार भएर पनि झुण्ड – झुण्डमा विभाजित राष्ट्रवादी हरू एकाकार हुन नसकेकाे अवस्था हाे । विचार र मुद्दाका पक्षमा उभिनु भनेकाे कुनै किर्ति र जस लिनका लागि हाेइन । किनकि न त आफ्नाे किर्ति राख्न काेलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाए । न त जस लिनकै लागि ग्यालिलियाे ले पृथ्वी घुम्छ भनेका थिए । त्यसैले जस पनि मैले पाउनु पर्छ अनि अहिले उर्लिएकाे युवा उभारकाे किर्ति पनि मेरै नाममा लेखिनु पर्दछ भन्ने मानसिकता बाट माथि उठ्न सक्नु पर्दछ भन्दै आग्रह गरेकाे हाे । हामीले आग्रह गरेकाे पथ भनेकाे कसैका लागि एक्लै हिड्न हाेइन — त्याे पथमा सबै राजसंस्था वादी र हिन्दुवादी हरू संगै मिलेर हिड्नु पर्दछ भनेकाे हाे । नेतृत्व गर्छु भन्ने इच्छाशक्ति राख्ने हरूलाई हाेसियारी बन्नु पर्दछ भन्दै सम्झाउन खाेजेकाे हाे । चिन्तनमय बनाैं अनि भाषणमा मात्र ठूलाे स्वर हाेइन ….. व्यबहारमा पनि विचारकाे धरातल देखाअाैं भनेकाे हाे । दया ,करूणा ,अनुकम्पा , प्रेम र सद्भाव जस्ता गुण बाेकेर अाफ्नाे मान्यता लाई सर्वाेच्च शिखर पुर्‍याउनु पर्दछ भनेकाे हाे । उत्तेजित हुँदै भावावेशमा अाएर अरू सबैलाई निषेध गरि खण्ड – खण्ड बनाउने अहंकार पथमा हाेइन ……. विचारकाे पथमा सबै सहकर्मी हरूलाई एकसाथ सहयात्रा गराऔ भन्न खाेजेकाे हाे । कल्पवृक्ष समान हाे हाम्राे विचार – त्यसैले सबै मिलेर मलजल गर्दै पुष्पित र पल्लवित गराऔ भन्दै आग्रह गरेकाे हाे ।
त्यसैले अझपनि बुझ्न सकेनाैं । सबै राजसंस्था वादी र सनातन हिन्दुवादी हरू एउटै छातामुनि गाेलबन्द हुन सकेनाैं । तथ्यकाे आधारमा सत्यकाे खाेजी गर्न हामीले अबपनि सकनाैं भने समयले दिएकाे माैका फेरि सदाका लागि गुमाउने छाैं । त्यसपछि ” काैडीमा पनि मिल्कन्छ भिल्लका देशमा मणि ” भन्दै कविशिराेमणि लेखनाथ पाैड्यालले लेखेझैं ….. साच्चिकै भिल्ल बनेर सबैभन्दा ठूलाे ह्रासाेन्मुख यात्रामा हिड्न हामी बाध्य हुने छाैं । अन्तमा पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा देश विदेशमा रहनु हुने सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना !!